Streak: Tantano ny fantsom-pivarotanao amin'ny Gmail amin'ity CRM feno ity | Martech Zone
Nametraka laza malaza ary niasa foana teo amin'ny tranokalako, ny fiteniko, ny nosoratako, ny resadresaka nataoko ary ny orinasako… ny isan'ny valiny sy ny fanaraha-maso ilaiko matetika. Tsy manana fisalasalana aho fa very fotoana tena tsara satria tsy nanara-maso ny vinavinan'asa ara-potoana.
Ny olana anefa dia ny habetsaky ny fikasihan-tanana tokony hizahako hahitako ireo fifandraisan'orinasa manana kalitao dia lehibe tokoa. Raha ny marina dia azoko antoka tsara raha nanaraka ny fangatahana rehetra aho fa tsy hanana fotoana hamitana ny asan'ny mpanjifa tena izy! Na izany aza, tena ilaina ny manangana fantsom-pifandraisana mahomby rehefa manatanteraka tetikasa ianao ary mifindra amin'ireo mpanjifa. Tsy maintsy mahomby amin'ny fotoanao ianao… manohina isaky ny fotoana ny prospect tsirairay, mahafeno fepetra azy ireo ary mandroso azy ireo amin'ny alàlan'ny fizotry ny varotrao.
Ny orinasa lehibe rehetra dia manana fantsom-pivarotana mahomby izay ahalalany ny dingana misy ny vinan'izy ireo, iza no akaiky indrindra ny fanidiana, ary ny fahaizana maminavina ny fahaizan'izy ireo manidy sy mampivoatra orinasa. Mampatahotra ahy izany ary tsy mino aho fa tsy manam-paharoa ny toe-javatra misy ahy. Mino aho fa ny ankamaroan'ny orinasa madinidinika dia sahirana amin'ny fitantanana ny fantsom-pivarotana varotra sy ny fahazoana mitarika ny kalitao ary ny fanilihana. Indrindra rehefa tsy matihanina amin'ny varotra matihanina sy za-draharaha izy ireo.
Io n'aiza a Customer Relationship Management (CRM) ilaina ny rafitra. Miaraka amin'ny CRM, azonao atao ny manisy saina ny vinavinanao, mitazona an-tsoratra azy ireo, mamantatra ny dingana amin'ny tsingerin'ny varotra misy azy ireo, mamorona asa fanarahana, ary mitantana amin'ny laoniny ny fifandraisan'ny orinasa. Ary… raha maro ny mpikambana ao amin'ny orinasanao dia azonao atao tsara ny mandray an-tanana ny asa-tanana sy ny fanendrena eo anelanelan'ny mpiasao.
Streak: Tantano ny fantsom-pivarotanao amin'ny Gmail
Ny fandrindrana sy fitantanana fonosana rindrambaiko iray hafa hanaovana izany dia asa bebe kokoa, tsy latsa-danja. Ny ankamaroan'ny hetsika dia mitranga amin'ny alàlan'ny mailaka, noho izany ny fananana CRM izay mifangaro amin'ny sehatra mailakao dia tsy maintsy ilaina amin'ny fahatsorana sy fahombiazana. Raha miasa ny orinasanao Google, Streak mety ho vahaolana tonga lafatra ho anao.
Streak dia mifamatotra mivantana amin'ny boaty fampidirana Gmail anao, manana plugins misy anao ary manana rindranasa finday tsara. Ny endrik'i Streak dia misy:
Gmail Integrated CRM - ny zavatra rehetra ilainao hahatongavana amin'ny "closed-won" dia miafina ao amin'ny mailakao. Streak dia misambotra ny fifanarahana nataonao ary manitatra Gmail efa misy ao anaty CRM miovaova sy feno endrika.
Amboary ny fizotran'ny varotrao - Rehefa miova ny paikady fivarotanao dia eo noho eo sy eo noho eo ny fanavaozana ny Streak. Manampia tsanganana vaovao misy karazany, mamerina mandamina dingana, na mamafa ny angona amin'ny fotoana rehetra. Ny tsanganana dia natao manokana hanaiky ny isa, lahatsoratra endrika maimaim-poana, menio latsaka ambany, boaty ary zavatra hafa mety hilainao.
Amidio fiaraha-miasa - Ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fotoana iray dia afaka mamaky mailaka feno na tsy tafiditra ao aza ny kofehy. Azonao atao ihany koa ny mifehy ny fidirana angon-drakitra amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipanao miaraka amina andraikitra alalana.
Panel eo amin'ny boaty - Tehirizo ny fanamarihana, asio asa ary fanaraha-maso avy hatrany amin'ny tontonana tafiditra tsara amin'ny alàlan'ny plugins browser Streak ho an'ny Chrome na Safari.
Snippets mailaka - Ampidiro amin'ny baiko manan-danja ny lahatsoratra miverimberina matetika. Manorata haingana fampidirana sy fanarahana ary fampahatsiahivana feno. Esory ny fotoana very maina sy ny famoizam-po miverimberina.
Fanarahana ny mailaka - Mampahafantatra anao ny fanarahana ny fotoana, ny toerana ary ny impiry impiry no jerena ny mailaka. Ampiasao ny Streak hiantsoana lohataona amin'ny fotoana marina iheverany anao.
Mail Merge - Streak dia manala ny fahasarotana amin'ny mailaka marobe. Soraty ny hafatrao, safidio ny lisitry ny mpandray, ary andefaso.
Tatitra momba ny fantsona - Ny famoronana tabilao sy sary maroloko dia mora amin'ny Streak. Jereo hoe ahoana ny fivezivezen'ny vola amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody misy anao sy ireo mpandray anjara manao akony lehibe indrindra.
Midira ho an'ny làlana
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Streak ary ampiasaiko ny rohy mpampifandray ahy ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: app androidandroid crmnavigateur pluginChrome pluginCRMfifandraisana amin'ny mpanjifahanarakaGmailGmail CRMfanaraha-maso gmailgoogle suitegoogle workspacefampiharana iosiOS crmandraikitra voatendryfahaizana mitarikamanambatra mailakafantsonafanantenanafanitarana safarifantsom-pivarotanaStreakasafivarotana ekipa